Tonizia: Fanombohan’ny Fanentanana Manokàfa Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2010 16:28 GMT
Tsy nandroso, tsy nihemotra ny tontolon'ny fitorahana bolongana Toniziana hatramin'ny volana Aprily. Fa izao tokoa, volana mainty ho an'ireo Toniziana mpitoraka bilaogy iny satria maherin'ny 100 ny bilaogy noraràn'ny manampahefana, nampihena ny risi-pon'ireo mpitoraka bilaogy sisa, izay najary niahotrahotra hanoratra any anaty bilaogin-dry zareo. Nanomboka hatreo dia nanolo-kevitra i Arabasta, mpitoraka bilaogy, ny hanombohana fanentanana anaty aterineto hanaingàna ireo Toniziana mpampiasa aterineto hanokatra bilaogy. Ny mpitoraka bilaogy sasany dia namaly ny antso, raha nandà izany kosa ny hafa.
Fito volana aty aoriana, ilay fanentanana dia voizina eo ambanin'ny anarana hoe ‘7el Blog’ (Tenim-paritra Toniziana) izay raha adika dia manao hoe ‘Mandefa/Mamorona bilaogy’. Misy bilaogy iray noforonina mitondra anarana mitovy amin'io.
Ao anatin'ny lahatsorany voalohany, manazava i Arabasta ny amin'ny tanjona ao ambadiky ny fanentanana sady mankahery ny olona hanokatra ny bilaogin'izy ireo manokana:
Manomboka androany ny fanentanana ‘Manokàfa bilaogy’.
Inona no tanjona? Faran'izay mora ny fanazavàna azy: ianao izay mpamaky bilaogy dia ho lasa mpanoratra bilaogy iray.
Nahoana no tokony handray anjara ianareo? Satria aho te haneho ny hevitro, hiresaka, hilaza ireo olako.
Tsy azoazonao ny toetr'andro, ratsy ny sisin-dàlana. Inona ny tokony hosoratako? Ny zavatra rehetra. Tsy voatery ho matotra be ny bilaogy ka hanaraka fepetra hentitra. Afaka miresaka momba ny reninao nanery anao handeha hanambady ianao, na ny asanao izay tsy tianao.
Momba ny lafiny teknika amin'ny pitsin-javatra rehetra: sahala amin'ny manokatra kaonty mailaka io. Afaka manao izany ny olona rehetra. Tsy mila manana fahaizana be momba ny IT ianao (Teknolojian'ny Fampitam-baovao). Na mpanankarena, mahantra, mpampianatra, mpahay fizika, injeniera, tsy an'asa, manambady, tokantena, tanora, antitra, misotro ronono, na ingahy tofo-dava, ny tsirairay avy amintsika dia afaka daholo manokatra bilaogy iray.
Raha mbola misalasala ianao, hanoratra lahatsoratra ny vondrona iray misy an'ireo mpitoraka bilaogy ela nihetezana ary hanampy anao hanoratra. Aorian'izay, ho mora ny zavatra rehetra.
Ambonin'izay, Vondrona Facebook iray no natsangana. Maherin'ny 500 ny olona efa nirotsaka ho ao anatiny tao anatin'ny 24 ora latsaka fotsiny.
Kaonty Twitter iray ihany koa no noforonina ka ampiasaina ao ny tenifototra #7ellblog:
Andriamanbitra o , bilaogy 11 no voaforona tanaty andro iray. Tiako ianareo ry vahoaka Toniziana.
Manampy i Arabsta ao amin'ity lahatsoratra ity:
Manome izay, ho an'ireo tia mikirakira antontan'isa, bilaogy 13 anaty andro iray: Eny, manana izay zavatra tiany hambara ny tanora Toniziana. Te-hiteny sy haneho ny heviny izy ireo! Mankahery an'ity vondrona mpisava làlana ity isika ary miandry ny hahita an'io isa io hitombo betsaka hatrany hatrany.
Nahazo fandraisana tsara tokoa avy amin'olona maro ity fandraisan'andraikitra ity ary antenaina fa ho velona sy hihetsika indray ny tontolon'ny fitorahana bilaogy Tonisiana.